Laba jeer ka fikir dhagari inay ku jirto xiriirada qaar ee lamaanaha | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Laba jeer ka fikir dhagari inay ku jirto xiriirada qaar ee lamaanaha
Laba jeer ka fikir dhagari inay ku jirto xiriirada qaar ee lamaanaha
Posted by: radio himilo December 22, 2016
Zimbabwe (Radiohimilo) – Wada-socoshada lamaanayaashu in badan kama dhigna sawir farxadeed iyo isku qanacsanaan kuwo laga qaato. Sheekooyinka qaar ee ay lamaanaha jaceyl-wadaagta ahina iskula dhaqmaan ma ahan badi kuwo ku idlaada dhamaad farxadeed. Tani waxay nagu dhiirri-gelinaysaa inaan si dhaqsi leh u xukmin xiriirka ka dhaxeyn kara labada qof ee jidka wada-qaada. Taas waa marka aad aqriso qisooyinka dhagarta iyo dibin-daabyada ku lugta leh ee ay iskula dhaqmaan.
Mid sheeko ah oo tusaale ka ah dhagartaas ay iskula dhaqmaan lamaanayaasha isla socda waa lamaane xiriir wadaag ahaa oo ku nool dalka Zimbabwe – kuwaas oo safarkoodii ay ku galeen inay tagaan goobaha la isku qurxiyo ee timaha lagu hagaajiyo kadib ku dhameystay waji-gabax iyo kala dhimasho.
Falkani oo ka dhacay xarunta lamaanayaasha timaha iyo wajiyada loogu hagaajiyo oo ku taalla caasimadda Harare ee Zimbabwe, waxay soo jiidatay indhaha dadkii ka ag dhawaa.
Kahor intuusan sugin inta looga dhameynayo hagaajinta timaha ee saaxiibtiis, wiilkan wuxuu iska dhiibay lacagtii isaga gaar loogu lahaa: wuxuuna ka degay albaabka. Jeer iyo markaas, gabadhu waxaa lagu howlanaa hagaajinteeda. Balse wiilka ayaa sheegay inuu soo laabanayo: bixinayana lacagta lagu leeyahay saaxiibtiis.
Markii gabadha loo dhameeyey timaheeda, ogaal la’aanta in saaxiibkeed uusan bixin lacagteeda, waxay isku dayday inay albaabka ka degto. Hayeeshe, waxaa loo sheegay in lagu leeyahay lacag oo ay bixin karin. Wiilka ayaa dansaday tilifoonkiis in cabbaar ah kadib markuu hubsaday shilka inay ku jirto.
Balse tirada badnida qarashka ku baxay madaxeeda, milkiilaha xarunta ayaa ku dooday inay bixiso lacagta ama ay ku raaxaysato madaxeeda oo xiiran. Dadaal dhowr ah oo gabadhani isku dayday inay ku hesho ci ka meg-dhabta qaanta saaran ayaa ku dhamaaday fashil. Waana markii ugu danbeyn ay aragtay madaxeeda oo daqiiqado kooban qaababkiisu isku badaleen qurux iyo qayirnaan.
Muuqaallada sawiradeeda oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay haweeneyda oo timaheeda qasab looga xiirayo – awoodda kaliya ee ay heleysana uu ahaa inay ilmeyso.
Aargudashada ugu fiicani waa in qofka aad xiriir wadaagta tihiin aad xumaha uu kugu falo ugu badashaa wanaag iyo samaan, si aad ugu naalooto ku noolaanshiyaha is faham ku dhisan kalsooni, kalgacal iyo daryeel ee ma ahan dhagar iyo dibin-daabyo.
Previous: Haweeney magac madaxweyne caan ah la baxaysa si ay kaalmo u hesho
Next: Markuu ardaygu jeclaado macalimaddiisa – si uu u guursado.